Nri na nri - Vondt.net - peeji nke 2 nke 16
- Artificial sweetener: trackgba ọsọ ngwa ngwa?
19 / 07 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
Enwere otutu uzo ozo maka shuga na ahia maka ndi choro igbutu kari kalori na nri ha. Ihe nke a bu na ihe omumu ohuru nke edeputara n’ime akwukwo nyocha nke ndi Metabolism ekpughere na mbiputa “ihe oriri” nke ihe onunu na nri iriba-ama na agu - nke n’eduba n’inwe oriri na iri.
Ihe ndị na-atọ ụtọ, dị ka shuga, amụbawo ka nkezi nke ndị bi na-abawanye. Dị ka ihe atụ, ị maara na ihe dị ka otu onye n’ime ụmụ nwoke atọ buru ibu? Ihe kpatara ọtụtụ ndị ji ahọrọ iji ndị a bụ na ha enweghị obere calorie mgbe ha na-enye ụdị ụtọ ahụ dịka shuga. Ya mere, nke a ga-adị mma, nri?
Ọmụmụ: Ngwaahịa "Nri" nwere ike ibute agụụ
Ngwaahịa n'ahịa dị ka "enweghị shuga", "nri" na "ụtọ naanị" nwere ike ịnwe ezigbo uto. Ọmụmụ ihe ọhụrụ ahụ gosipụtara na ha nwere ike inwe mmetụta dị egwu na agụụ na uto.
Emere nnyocha ahụ na Mahadum Sydney ma gosipụta ndị nyocha ahụ na enwere mpaghara ụbụrụ akọwapụtara nke na-akọwa ụtọ na nri ume nke nri anyị na-eri. Ọ bụ n'akụkụ a ka ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara ihe dị ịtụnanya.
Mgbe enyere umu anumanu n’ime akwukwo ihe oriri nke nwere ihe di elu nke ihe di n’ime ha, nke bu ezigbo nri, ha riri nri riri nne karie. Nchọpụta gosiri na ihe arụrụ mmadụ gbanwere mmetụta agụụ na ụbụrụ ma mee ka ụmụ anụmanụ rie calorie karịa ma e jiri ya tụnyere ndị na-ahụ maka njikwa. Sucralose bụ usoro nke sucrose, ọ dịkwa ụtọ karịa ugboro 650 karịa shuga - nke nwere ike ibute ụzọ kọwaa akụkọ siri ike na ụbụrụ, ebe ọ kwenyere na ọ ga-enweta ike ugboro 650 karịa. Aspartame bụkwa anụ na-atọ ụtọ mmadụ na-ejikarị na Norway.
- Mgbe ụbụrụ na-aghọtaghị
Dịka anyị kwuru, enwere nkọwa na-ezighi ezi mgbe ụbụrụ chọpụtara na ahaghị n ’anya n’agbata sweetener na ike (kalori) - dịka e si kwuo ya, nwere ọtụtụ shuga na ihe dịka obere kalori, ya bụ ume efu. Prọfesọ Greg Neely kwuru ihe ndị a:
"Site na nyocha nyocha banyere mmetụta a, anyị chọpụtara na n'ime ụgwọ ọrụ ụbụrụ, a na-atụle ụtọ dị iche na ike. Ọ bụrụ na enwere ịha nha ọ bụla dị n'etiti ndị abụọ a, ka oge na-aga, mgbe ahụ ụbụrụ ga-atụgharị uche ma hụ na ị na-enweta calorie ndị ọzọ. "
- 30 pasent elu kalori oriri
Ndị nchọpụta ahụ ji nri nwere mkpụrụ akụ́kụ́ nri nri ruo ụbọchị ise. Mgbe enyere ohere ijiji laghachi nri nri ha, ha tụtara nrịgo caloric nke pasent 30 zuru.
Egosipụta mmụba a na eziokwu na iri nri na - atọ ụtọ na - agbanwe ụbụrụ nkọwa nke ogo uto - nke pụtara na mgbe ijiji nwetaghachi nri nri ha, na - akọwahie ụtọ ahụ ka akọwahie nke ọma karịa ka ọ dị n'ezie. Ya mere, ụbụrụ ahụ amatala onwe ya n'ihe metụtara ụtọ mmadụ mere ọ nwere na mbụ - ya mere na aghọtaghị ihe kpatara shuga, nke ji okpukpu 650 dị ụtọ karịa nke sucralose, nyere ya ume karịa. Emeghachiri ọmụmụ ihe ahụ na ụmụ oke na nsonaazụ otu a.
- Ihe eji esi mmiri mmiri na-emetụta agụụ site na ịmetụta netwọkụ mgbagwoju anya
Ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara na agụụ na agụụ bara ụba site na netwọkụ nke neurons dị mgbagwoju anya. Netiwu a na - ada mkpu ma ọ bụrụ na inwetabeghị ike zuru ezu ma e jiri ya tụnyere ihe ị riri.
Yabụ na site n’ịchịkwa nri, ndị sayensị nwee ike ịkọwa mpaghara ụbụrụ a tozuru oke. Ha chọpụtakwara na enwere ezigbo nzaghachi ga-eme ka nri dị ụtọ mma - ma na-erikwu ya - ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị n'ezie.
- A na - ejikọkwa ihe ndị na - esi mmiri ụtọ na ọtụtụ mmetụta ndị na - adịghị mma
Hyperactivity, ogo ụra abalị na ehighị ụra nke ọma so na nsonaazụ ọzọ ndị nchọpụta chọpụtara na otu ahụ gụnyere ụtọ mmadụ. A makwaara nke a site n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ edepụtara na mbụ.
N’ụwa nke oge a ebe anyị na-araparakwu n’ihe gbasara “nri” n’amaghị ama ma ọ na-arụ ọrụ, mgbe ụfọdụ ị ga - ekwuzi. Ya mere, ihe omumu a gosiputara na uto ndi mmadu nwere ike ime ka oke nsogbu buru ibu - ghara iwetulata ya. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji shuga ma ọ bụ na-a drinkụ ihe ọ lightụ lightụ dị ọkụ mgbe ahụ echiche nke onwe anyị bụ na ị nwere ike itinye ha na shelf - ruo mgbe ebighi ebi. Ahụ gị (na BMI) ga-ekele gị maka nke a. Kama, nwaa ihe ndi ozo dị ka mmanụ a ,ụ, maple sirop ma ọ bụ shuga na-enweghị nkọwa. Ee, ọ chọrọ nrụzigharị, mana ọ dịkarịa ala dịka ọ dị mma mgbe ụbụrụ na - amagharịghachi na nkịtị.
Ọzọkwa gụ: - Ihe ịrịba ama isii nke ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kunstig-søtning.jpg?media=1648573622 396 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-07-19 08:28:212022-03-18 17:26:35- Artificial sweetener: trackgba ọsọ ngwa ngwa?
6 Fooddị nri na-enye nchekwa nke ka mma
09 / 07 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
Know mara n'ụdị nri nri ụfọdụ arụpụtala ọfụma ma a bịa n'ịkwawanye ebe nchekwa na iweta ahụike dị mma. Nke a bụ ụdị nri 6 ị ga-eri karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụbụrụ dị mma.
Àkwá bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma nke choline na-edozi ahụ si arụ ọrụ. E nweela nri bara ụba na choline na ebe nchekwa ka mma yana ụba ụbụrụ. Àkwá nwekwara protein nke nwekwara ike inye ezigbo agbam ume.
Salmon na azụ ndị ọzọ nwere abụba (dịka sardines na mackerel) nwere oke DHA (docosahexaenoic acid) na EPA (eicosapentaenoic acid), ha abụọ dị ezigbo mkpa maka ahụike ụbụrụ dị mma. Gbalịa iri azụ nwere mmanụ ọtụtụ ugboro n'izu iji kwalite ọnọdụ nri ụbụrụ.
4. Mkpụrụ osisi beri
Nnyocha e mere egosiwo na mkpụrụ osisi pọpụpọ nwere ike igbochi icheta ihe na iche echiche ọrụ. A na-ejikọkwa bred na-egbu osisi na antioxidant bara uru nke nwere ike ịba uru ahụ ndị ọzọ.
5. Mkpụrụ Mkpụrụ pumpkin
Mkpụrụ ndị a nwere oke zinc dị oke. Nri na-eme ka e nwee ezi echiche na ncheta. Anyị na-akwado ịgwakọta mkpụrụ ugu (na mkpụrụ osisi flax) na ọka ma ọ bụ na-eme achịcha.
Kọfị jupụtara na antioxidants, ọkachasị ma ọ itụọ mmanya n'ụdị ojii ya na-enweghị ihe mgbakwunye dịka shuga na mmiri ara ehi. Caffeine, na usoro dị nro kwesịrị ekwesị, ejikọtawo ya na ọrụ ụbụrụ ka mma. Nke a metụtakwara tii.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/sunnere-hjerne.jpg?media=1648573622 422 750 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-07-09 11:42:492022-03-18 17:26:176 Fooddị nri na-enye nchekwa nke ka mma
Peeji nke 2 nke 16<1234>»